Social Media Marketing amụma amụma: Tellagence
Tellagence: ọgụgụ isi Social Marketing
Fraịde, Ọktọba 19, 2012 Fraịde, Ọktọba 19, 2012 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-emeso mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ha ga-esi na mgbasa ozi ọdịnala ndị ọzọ. Chọta ebe bọọlụ anya nọ ma chụwa ha. Ihe dị iche na ya bụ nnukwu. N'ime netwọkụ mmekọrịta, enwere mmemme atọ:
Idebe - ndị na-ege ntị na-esote ma weghara ozi maka ojiji nke aka ha.
Mmekọrịta - obodo nke na-aza ma na-enye nzaghachi maka ozi ahụ ekesara.
Promotion - ndị mmadụ n'ime ndị na-ege ntị ma ọ bụ obodo ndị na-ekerịta ozi ahụ ha ndị na-ege ntị na / ma ọ bụ obodo.
Maka ụlọ ọrụ na-emekọrịta ihe na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ ndị a siri ike - ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume - nyochaa na ịkọ amụma. Enwere plethora nke mgbasa ozi mmekọrịta nchịkọta nyiwe dị n'ahịa, mana imirikiti n'ime ha bụ unidimensional… na-enye usoro metụtara ruo na ịkekọrịta.
Ọ dị mkpa ugbu a doro anya maka ndị na-ere ahịa iji ghọta ma leverage metụtara mmetụta ndị ahịa ahịa nwere ike ịdị. Tellagence zara ajụjụ a. Anyị kere sayensị nke na-ebu amụma omume na ntanetị ntanetị. Tellagence na-enyere gị aka iru ikike ịzụ ahịa mmekọrịta gị site na ị na-eme ka Twitter gị ruru.
Nkwupụta ọ pụtaghị ịgwọta nsogbu m na - ede ebe a, mana ha nwere olile anya ị nyekwu ọgụgụ isi ịmatakwu na ụdị mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, bido na Twitter.
Site na Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Tellagence
Nkwupụta bụ a na-elekọta mmadụ amụma amụma, nke ọma unlocks mgbagwoju nke online mmekọrịta mara onye ga-akpali rue na gị ika ozi. Ngwaahịa mbụ nke Tellagence, Tellagence maka Twitter, ka ewulitere na algorithms nke na-enyocha ma ghọta mmekọrịta dị na mmekọrịta n'etiti netwọkụ. Nkà na ụzụ a na-agbagha agbagha maka gburugburu, na-aghọta mgbanwe n'omume na n'ụzọ doro anya, na-eji sayensị wuru iji ghọta nkwukọrịta mmadụ na ntanetị dị ka ngwọta nyocha netwọkụ ọ bụla ọzọ.
Kedu ka Nkwupụta iche iche? Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ihe ndị ọzọ na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya - dị ka ichebe ndị nwere ọnụ ọgụgụ na-eso ụzọ dị elu ma ọ bụ ọnọdụ ndị ama ama - sayensị Tellagence na-achọpụta ma na-etolite mmekọrịta miri emi, nke nwere mmasị na-enweghị isi iji nye ụdị ndị bara uru na ndị nwere oke nkọwa.
Nkwupụta lụrụ sayensị akparamagwa nke mmadụ na iji nlezianya na-atụ ụdị atụ ga-atụle mmetụta nke ihe dị ka ime mkpebi, ịbawanye ma ọ bụ ibelata ike nke mmekọrịta, yana ọrụ netwọkụ. Ngwaahịa mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, Tellagence maka Twitter, weghaara mkparịta ụka nke mkparịta ụka ma na-ebu amụma site na ịtụle mgbanwe na-agbanwe agbanwe na-eme n'ime netwọkụ.
Tags: chọta ndị na-eme ihemmetụtanchịkọta influencernchịkọta mmadụahịa mmadụọgụgụ isi ahịa ahịaizu ikeTwitternchịkọta twitter
Nchịkọta Mba maka Ndị Na-emepe Ngwa Ngwa
Aha ya bụ Matt Hixson
Ọkt 19, 2012 na 2:27 PM
Daalụ maka iwepụta oge iji dee edemede Douglas. Anyị jidere ya. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịza ajụjụ ọ bụla maka gị biko biko gwa anyị.
Nov 30, 2012 na 5:43 AM
Ọ dị mkpa na ọtụtụ obere azụmaahịa nwere ibe Facebook
ewu ha ika, na-ekwurịta okwu na ahịa na Fans, na ịnọgide na-enwe
nti PR. Na-enweghị ọnụnọ Facebook, azụmahịa nwere ike ịhapụ ha
ndị na-asọ mpi, ọkachasị ndị ahọrọla ịgbanye soshal midia.